दृष्टिकोण Archives ~ Page 26 of 27 ~ Banking Khabar
आजको जस्तो प्रतिष्पर्धात्मक युगमा पनि नेपालका बैँकहरुले ग्रामीण भेग तथा विपन्न समुदायसम्म आफ्नो पहुँच पुर्याउन नसक्नु नेपालको वित्तीय क्षेत्रका लागि घातक कुरा हो । नेपालमा झन्डै डेढ सय बैँक तथा वित्तीय संस्थाहरु सञ्चालनमा छन् । तर, झन्डै २० लाख नेपालीहरुलाई बैँक के हो भन्ने कुराको समेत जानकारी नभएको बताइन्छ । यसको प्रमुख कारण भनेको बैँकहरु
प्रा.डा. फत्तबहादुर केसी, अध्यक्ष, बिमा समिति बिमा भनेको सम्भावित जोखिम हस्तान्तरण गरिने र वित्तीय सुरक्षा प्रदान गरिने एउटा संयन्त्र हो । जीवन बिमाले बिमितका परिवारलाई भविष्यमा आउन सक्ने समस्याका लागि वित्तीय सुरक्षा प्रदान गर्दछ । साथै यो एउटा बचत पनि हो । जीवन बिमामा तिरिएको बिमाशुल्क बचतका रूपमा रहने र निश्चित समयपछि त्यसमा प्रतिफलसमेत जोडिएर
नवराज कुँवर – मुलुक कानून निर्माणको चरण पूरा गरी कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गर्दैछ । यो बेला वित्तीय संघीयताको बहस त्यति धेरै चलेको पाइँदैन । देशको वा कुनै पनि राज्यको अर्थनीति र वित्तीय अवस्थाअनुसार त्यहाँको विकास तय भएको हुन्छ । त्यस कारण पनि अबको संघीय प्रणालीमा वित्तीय संघीयताको बहस अपरिहार्य छ । खासगरि केन्द्रदेखि तल्लो एकाइसम्म आर्थिक
राजगोपाल राजभण्डारी (अध्यक्ष, नेपाल रेमिटर्स एशोसिएसन) नेपालीहरू भारतबाहेक तेस्रो मुलुकमा रोजगारीका लागि जान थालेपछि सन् १९९० को दशकबाट नेपालमा रेमिट्यान्स भित्रिन थालेको हो । नेपालीहरु ब्रिटिस सेनामा भर्ती हुन थालेको समयदेखि ब्रिटिस सेनाबाट फर्किदा व्यक्तिगत वा बैंकमार्फत उनीहरुले नेपालमा रेमिट्यान्स भित्र्याउन सुरुवात गरे । तर, सुरुवाती अवस्थामा रेमिट्यान्स अव्यवस्थित थियो, सुरक्षाको प्रत्याभूति पनि हुँदैनथ्यो ।
वि.सं. २००७ साल फाल्गुनमा नेपालमा युगान्तकारी परिवर्तन भएपश्चात् राजनीति र प्रशासन प्रणालीमा आमुल परिवर्तन आयो । त्यसपछिको करिब १० वर्षको कार्यावधिमा राजनीतिक नेता तथा प्रशासनमा नवनियुक्त कर्मचारीहरुलाई देश र जनताको हितको लागि नयाँ प्रशासकिय निकाय र संस्थाहरु संस्थापन गर्ने तथा नयाँ प्रशासन प्रणाली तर्जुमा गरी लागू गर्ने अवसरहरु प्राप्त भयो । सोहि समयमा ५ वर्ष
वर्षदिन अगाडि नेपालमा गएको विनाशकारी भूकम्पले पुर्याएको क्षतिबाट राहत हासिल गर्न बिमा नगरिएको विषय जुन रूपमा महत्वका साथ उठ्नुपथ्र्याे, सोअनुरूप बहस भइरहेको पाइँदैन । तथापि बिमा समिति र बिमा कम्पनीहरूले यस क्षेत्रमा आफ्नो प्रयास जारी राखेको बताएका छन् । बितेको वर्ष अर्थात् ०७२ सालमा भूकम्पका कारण १८ अर्ब ५८ करोड २६ लाख रुपैँयाको क्षतिपूर्ति दाबी
प्रकाशराज शर्मा, सिइओ लक्ष्मी लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड पछिल्लो समय नेपालका लघुवित्त बैंकहरुको अवस्था सुधारोन्मुख छ । गत वैशाख १२ गतेको विनाशकारी भूकम्प, मधेश आन्दोलन र भारतीय नाकाबन्दीका कारण प्रभावित बनेका ठाउँहरुका लघुवित्त बैंकहरुको कारोबारमा ठूलै असर पुगेको थियो । तर पछिल्लो समय ती संस्थाहरुको कारोबारमा क्रमशः सुधार आइरहेको छ । मुलुकमा अहिले झण्डै ४०
गोविन्द काफ्ले – बङगलादेशका नोवेल शान्ति पुरस्कार बिजेता डाक्टर मो.युनुसको लघुवित्त सम्बन्धी अवधारणा बिकास भई हाल संसारभर छरिएको छ । सोही अवधारणामा हाल नेपालमा लघुवित्त कार्यक्रमहरु संचालित छन् । लघुवित्त संचालन गर्नेमा अग्रणी अवस्थामा लघुवित्त विकास बैंक, विकास बैंक र सहकारी सस्थाहरु रहेका छन् । पिछडीएका जनताको आर्थिक अवस्थामा टेवा पुर्याउनु, बैंकिङ पहुचभन्दा टाढा रहेका
मुकुन्द अर्याल- नेपालमा अधिकांश मानिस शिक्षित भए पनि वित्तीय आधारमा भने धेरै कममात्र साक्षर र अधिकांश निरक्षर नै छन् भन्ने एक विज्ञको भनाइ सही प्रतीत हुन्छ । किनकि वित्तीय साक्षरताको क्षेत्र र परिभाषा अत्यन्त फराकिलो छ । वित्तीय आधारमा पूर्णतः साक्षर हुन वित्तीय बजारदेखि यससँग सम्बन्धित पुँजीबजार, बिमा बजार, बैंकिङ बजार, कमोडिटी बजार, राष्ट्रिय तथा
विमा जोखिम न्यूनीकरणको साधन हो । विभिन्न व्यवसायमा आवद्ध व्यक्तिहरुको लागि विमा अत्यन्तै आवश्यक पर्ने सरोकारवाहरुको भनाई छ । पछिल्ला बर्षहरुमा विमा समितिले विमा गर्नेको संख्या विस्तार गर्नको लागि अनुदानका कार्यक्रमहरु पनि ल्याएको छ । विभिन्न व्यवसायहरु गरेर बसेका धेरै मानिसहरु यसप्रति आकर्षित पनि भएका छन् । यसैबीच कृषि क्षेत्रमा विमा बढाउनको लागि राष्ट्रिय विमा
हामी सूचना तथा प्रविधिको युगमा छौँ । प्रविधिको प्रयोगले सिंगो संसारलाई नै एक ग्लोबल भिलेजमा परिणत गरिसकेको छ । हरेक क्षेत्रमा प्रविधिको प्रयोग अत्यावश्यक भइसकेको छ । बैँकजस्तो पैसाको कारोबार हुने क्षेत्रमा त झन् प्रविधिको आवश्यकता दिनदिनै बढिरहेको छ । संसारका प्रायः बैँकहरु प्रविधिमा नै निर्भर भइसकेका छन् । यता, नेपाली बैँकहरुले भने अझै पनि
करिब ६ बर्षदेखि बैंकिङ क्षेत्रमा कार्यरत विष्णु प्रसाद धिताल बैंकहरुले गाउँ केन्द्रीत भएर सेवा सुविधा प्रदान गर्नुपर्नेे सुझाउँछन् । वर्तमान समयमा सबै बैंकहरुले पारदर्शी काम नगरेको उनको बुझाई छ । यसैबिच, बैँकिङ क्षेत्रका वर्तमान कमी कमजोरी, लगानीको अवस्था लगायतको विषयका केन्द्रित रहेर बैंकिङ खवर डटकमले एपेक्स डेभलपमेन्ट बैँकका अध्यक्ष विष्णु प्रसाद धितालसँग गरेको कुराकानी यहाँ
त्रिलोचन पंगेनी, प्रवक्ता, नेपाल राष्ट्र बैँक वित्तिय साक्षरता भनेको मुलुकभित्र बस्ने सबै नागरीकले बैंक तथा वित्तिय संस्थाको कारोबारको व्यवस्थाको सम्बन्धमा बुझ्नु, जान्नु वा निर्धारीत मापदण्ड भित्र बसेर कारोबार गर्न सक्ने अवस्थालाई बुझाउँछ । बैंक तथा वित्तिय संस्थासँग कारोबार गर्न डराउने, आफ्नो पूँजी सुरक्षित हुन्न भन्ने किसीमको महशुस गर्ने धेरैजसो मानिसहरु यस्तो पिछडिएको मानसिकताबाट बैंकिङ कारोबारको
पछिल्लो समय नेपाल राष्ट्र बैँकले कृषिमा सहुलियत कर्जा प्रदान गर्नका लागि अन्य बैँक तथा वित्तिय संस्थाहरुलाई निर्देशन दिइसकेको छ । कृषि क्षेत्रमा बैँकिङ लगानी विस्तारका लागि विभिन्न पहलहरु भइरहेका छन् । पछिल्लो समय नेपाल राष्ट्र बैँकले डेनमार्क सरकारको सहयोगमा उन्नति प्रोजेक्ट नामक पञ्चवर्षिय परियोजना सुरु गरेको छ । त्यस्तै, ग्रामीण अर्थतन्त्र सुधारका लािग लघुवित्तहरु सञ्चालनमा
अनिल केशरी शाह, बैंकर्स मानिसहरु बिहान उठेर मनिङ्ग वाकमा एफएम, चिया खाँदा पेपर र बेलुका बसेर टिभी हेर्ने बानी छ । त्यसमा हामीले खालीे देश डुब्न लाग्यो नेताले यो गरेन, त्यो गरेन भन्ने राजनीति समाचार मात्र सुन्न र हेर्नुपर्छ । अब सबै जनाले विचार गरौं कि नेताले राम्रो गरे पनि नराम्रो गरे पनि हाम्रो दैनिक